लुकेर काम गरिन्न-पारदर्शी नेतृत्व हुनेछ :अध्यक्ष विनोद कटुवाल | Purnapusti
लुकेर काम गरिन्न-पारदर्शी नेतृत्व हुनेछ :अध्यक्ष विनोद कटुवाल
नेकपा उदयपुरले भर्खरै पूर्णता पाएको छ । १६२ सदस्यीय जिल्ला कमिटिको कार्तिक २ गते सपथ ग्रहण सम्पन्न भयो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछिको कमिटिको नेतृत्व माओवादीको तर्फबाट विनोद कटुवाल (दिवस)ले सम्हालेका छन् । नेकपा उदयपुरको नयाँ कमिटि, नयाँ नेतृत्वले अव पार्टी र गतिविधिलाई कसरी अगाडी बढाउछ ? पार्टीभित्र गुनासा र टिकाटिप्पणी पनि सुनिएका छन् । यिनै सवालहरुमा केन्द्रित भई नेकपा उदयपुरका अध्यक्ष विनोद कटुवाल (दिवस)संग पूर्णपुष्टिले गरेको संवाद प्रस्तुत छ ।
पूर्णपुष्टि : नेकपाको नेतृत्व पाउनु भएको छ । यसलाई कस्तो अवसर र चुनौतीको रुपमा लिनु भएको छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : यतिबेला अवसर र चुनौती दुवै सँगसँगै छ । किनभने दुईवटा पार्टी एक ठाउँमा उभिएकाले मिलाएर लैजाने कुरा असाध्य चुनौतीपूर्ण काम छ । यस चुनौतीलाई पार गर्दै सही तरिकाले समाधान गर्न सक्दा, सही तरिकाले काम कार्वाही अगाडी बढाउन सक्दा यो एउटा ऐतिहासिक अवसरको रुपमा पनि छ । नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलबाट यति शक्तिशाली पार्टी स्थापना भएको छ र यसले देश र जनताका निम्ती जनताको चाहानाहरु पुरा गर्नका निम्ति महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । जिल्लाको नेतृत्व रहेर राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्दा यसले एउटा ठूलो अवसर सृर्जना गर्छ । यो विशाल चुनौतीको रुपमा पनि छ । किनभने फरक–फरक बुझाईहरु, दृष्ट्रिकोणहरु, अभ्यासहरु, संस्कार सस्कृति, काम गर्ने तरिकाहरु भएकाले यसलाई एउटा ढाँचामा बदल्नका लागि निकै कठिन नै छ ।
भिडियो अन्तरवार्ता : हेर्नका लागि यो लिंक खोल्नुहोला ।
पूर्णपुष्टि : भर्खरै नेकपा उदयपुरले पूर्णता पायो । भर्खरै कात्तिक २ गते सपथ ग्रहण सकिएको छ । अव पार्टीलाई कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : हामीले टोल बस्तिसम्म पाटी एकिकरणको काम पुरा गर्नु पर्नेछ । सुरुमा काम चै संगठनात्मकरुपमा तल्लो तहसम्म एउटै पार्टी बनाउने पहिलो काम रहेको छ । अव गाउँ तह र स्थानीय तहका कमिटिहरुको एकिकरण प्रक्रिया पुरा गर्छाैँ । वडा, टोल, बस्तिको कमिटिहरुको एकिकरण गरेर पहिलो संगठनको काम सक्छौँ । त्यसपछि पार्टीमा राजनैतिक, बैचारिक छलफलका विषयहरुलाई अगाडी बढाउँछौँ । जनतामा सरकारदेखि पार्टी नीतिहरुको बारेमा प्रचार–प्रसारका लागि जनताकोवीचमा हाम्रो पार्टीका विचार नीति कार्यक्रमहरु पु¥याउनका निम्ति जनअभियानहरु संचालन गछौँ । यसलाई क्रमबद्ध रुपले मिलाएर लैजान्छौँ ।
पूर्णपुष्टि : पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पार्टी त एकता भयो तर कार्यकर्ताहरुबीचमा भावनात्मक एकता अझै हुन नसकेको कुरा छ । यो समस्या अव झनै कठिनाई बन्ला । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडी बढ्नु हुन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : अलिअलि त अप्ठ्यारो आउँछ । हामी निर्वाचन भन्दा अगाडी नै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हुनाले ठूलो भावनात्मक एकता पैदा भैसकेको छ । अझै पनि संगठनको क्षेत्रमा आफ्नो पूर्व–पूर्व मानसिकता पहिलो–पहिलो पार्टीको चै सोचहरु हुने नै भयो । किनभने संगठनात्मक रुपमा माओवादी र एमालेले फरक–फरक अभ्यासहरु गर्दै आयो । त्यसो भाको हुनाले भावनात्मक एकिकरणमा जान केहि समय लाग्छ । त्यसलाई मुख्य नेतृत्वले जस्तै केन्द्रका पार्टी अध्यक्षहरुले मुख्य नेताहरुले तल्लो तहका कमिटिका प्रमुखहरुले पनि त्यो सम्बेदनशिलतालाई बुझेर हामीले भावनात्मकरुपमा एक हुनेगरी काम कार्वाहीलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । त्यसो गर्नु सकिएन भने चै दुर्घटना पनि हुनसक्छ तर आजको भोली छिट्टै सकिने कुरा होईन । यसको लागि केही समय लाग्छ ।
पूर्णपुष्टि : यो पनि जानकारी दिनुस् कि उदयपुर जिल्लाको नेकपाको संरचना पूर्णता कसरी पायो ? कति संख्यामा भयो ? क–कस्ले पायो र यसको काम गर्ने सचिवालय कस्तो बन्छ र कहिलेसम्म बन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : हाम्रो १ सय ६२ जिल्ला कमिटि भएको छ । त्यसमा पूर्व एमालेबाट ९१ र पूर्व माओवादीबाट ७१ जना । यसरी कमिटि बनाएका छाँै । जिल्ला सचिवालय त्यसको एक तिहाई बनाउँछौँ । त्यसमा मर्यादाक्रम, पार्टीको ऐतिहास, पार्टीमा उहाँले गरेको योगदान, पुराना साथीहरुलाई राखेर सचिवालय गठन गर्छौँ । कार्यालय पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हिजोका दुई पार्टीका पदाधिकारी साथीहरु, सिनियर साथीहरु र योग्यताको आधारमा समेटेर बनाउँछौँ । दुई पार्टीबीचको एकिकरणकै क्रममा रहेकाले दुईपक्ष छलफल गरेर हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ ।
पूर्णपुष्टि : यसबीचमा कोहि छुटे भन्ने पनि छ की ?
अध्यक्ष कटुवाल : छन् साथीहरु छुट्नु भाको छ । सवैलाई एउटै कमिटिमा ल्याउन सकिदैन । तल्लो तह र माथिल्लो तहका कमिटिहरु बन्न अझै बाँकी छ । त्यसमा साथीहरुलाई समेट्छौँ ।
पूर्णपुष्टि : यसबीचमा आएको एउटा टिप्णीको कुरा गरौँ । जिल्लाको कमिटि बनाईदै गर्दा काम गरेका व्यक्तिहरु छुटे र नेताहरुको नजिकका मान्छेहरु बढी आए भन्ने छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : साथीहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । यो एउटा विशाल पार्टी हो । ऐमाले पनि निकै पुरानो पार्टी, माओवादी केन्द्र पनि जनयुद्ध हुदै आएको पार्टी । यसमा नेता, कार्यकताहरु चै क्षमतावान, योग्य, अनुभव भएका, ऐतिहाकि विभिन्न कालखण्डहरुमा निर्णायक भुमिका गर्नु भएका धेरै नै हुनुहुन्छ । अहिले आएका साथीहरु पनि त्यो भन्दा टाढा हुनुहुन्न । एउटा निश्चित सिमाभित्र रहेर सिमित कमिटि गठन गर्नु पर्नेथ्यो । त्यस क्रममा कसलाई ल्याउने भन्नु भन्दा पनि अहिलेको मुलत पुरानो जे जिल्ला कमिटि छ त्यहि नै हामीले समायोजन गरेको हो । त्यसमा काहि नयाँ र तलका मान्छेहरु ल्याएका छैनौँ । अव त्याहाँ ल्याउँदा खेरी पहिला एउटा–एउटा पार्टीको एउटा कमिटि थियो । त्यसमा नपरेका साथीहरु छुट्नु भएको छ । केही परेका साथीहरु पनि संख्या कम भएका कारणले छुट्नु भएको छ । तर त्यसरी नेतृत्वकै नजिकको भएको कारणले त्यसरी ल्याएको त मलाई धेरै लाग्दैन । केहि प्रश्नहरु उठाउँनु भएको छ । जो आउनु भएपनि पार्टी आन्दोलनको लागि काम गर्न कम्युनिष्ट पार्टीको नीति कार्यक्रम लागु गर्नका निम्ति आउनु भएको छ । छुट्नु भएका साथीहरुलाई अन्य जिम्मेवारीमा समेट्छौँ ।
पूर्णपुष्टि : पार्टीभित्रका गुट–उपगुट कसरी हेर्नु हुन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : पार्टी एउटा समाजको प्रतिबिम्ब हो । पार्टीमा चन्द्रमाबाट आएको मन्छे हुदैनन् । यहि समाजको मानिस हुन्छ । त्यसैले समाजमा हुने गतिविधिहरु हुन्छ, संघर्षहरु हुन्छन्, दृष्ट्रि कोणहरु हुन्छन् । त्यहि दृष्ट्रिकोणहरु पार्टीमा पनि प्रतिविम्वित हुन्छ । त्यसकारणले आ–आफ्नो दृष्ट्रिकोण मिल्नेहरुको टिम हुन्छ तर पार्टीमा एउटा आम पोलेसी, आम नीति, आम कार्यक्रम हुन्छ । त्यो कार्यक्रमको अधिनिष्ट सवै पार्टी सदस्यहरु बस्नुपर्छ । अव गुट पार्टीको आम नीति यस्तो बनाउनु पर्छ । विचार राजनीतिको आधारबाट हाम्रो विचार धाराको सवाल यस्तो हुनु पर्छ । हाम्रो राजनीति कार्यक्रम यस्तो हुनु पर्छ । यसरी बनाउनुपर्छ । संगठनात्मक कार्यशैलि यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा टिम बन्ने त्यो राजनैतिक गुट भयो । तव अहिले एउटा विकृतिको रुपमा के रहेको छ भने राजनैतिक पावरलाई दुरुपयोग गर्नका निम्ति आफ्नो एउटा स्वार्थहरुको झुण्ड बनाउने । त्यस्तो खराब नियत राख्नेहरुको पनि हुन्छ । तर हामी गुट भन्दा चै एउटा बैचारीक, राजनैतिक, दार्शनिक रुपमा चै एउटा आफ्नो दृष्ट्रिकोण राख्नेलाई त्यसलाई एउटा राजनैनिक गुट भनियो । अहिलेको समस्या चै के हो भने राजनैतिक शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने ।
पूर्णपुष्टि : उदयपुरको ईतिहासमा हेर्दा खेरी उदयपुरमा पूर्व ऐमालेभित्र गुट उपगुटको समस्या अहिलेसम्म कुनै पनि नेतृत्वले हल गर्न नसकिएको समस्या त्यो देखिन्छ । अव त्यस्तो अवस्थाका पार्टी एकतामा आएको छ । माओवादीभित्र पनि त्यो समस्या । पार्टी एकता हुदा अझै यो समस्या बढेको अवस्था हुनसक्छ । यो समस्यालाई तपाईको नेतृत्वले हल गर्ला ?
अध्यक्ष कटुवाल : गुट स्वाभाविकै रुपमा स्विकार गर्नुपर्छ । समाजमा विविधता भएपछि दृष्ट्रिकोणमा पनि विविधता हुन्छ । त्यसका आधारमा बनेका गुटहरुलाई मिलाउन धेरै गाह्रो छैन । छलफल गर्दै जाँदा खेरी एकढंगले मिल्छ तर स्वार्थहरुको गुट बन्छ । त्यो गुटले चै पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पु¥याउने हो । किन भने पार्टीको विचार धारा, दर्शन कार्यशैलि, संगठनात्म संरचनाको बारेमा जे बहस हुन्छ । त्यसले पार्टीलाई अझ शक्तिशाली र समृद्ध बनाउँछ । तर सत्ता प्राप्त गर्न, मेयरका टिककटका लागि, सांसदका टिकटका लागि, कुनै ठेक्का पट्टा मिलाउनका लागि र दृष्य अदृष्य रुपमा लाभका लागि यस्तो गु्रपहरु जुन बन्छ त्यसले चै पार्टीलाई सक्छ ।
पूर्णपुष्टि : त्यसलाई के गर्नु हुन्छ ?
अध्यक्ष कटुवाल : अव हामीले पार्टीलाई यो सवै कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई सुधार गर्ने, बदल्ने र बदल्नका लागि एउटा त पार्टी सदस्यता, कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बन्नको लागि के–के गर्नु पर्छ । यो विषयमा फेरी बहस गर्नु पर्ने बेला आएको छ । नेताहरुले माथि पनि भनिराख्नु भाको छ । जनताको खबरदारी पनि बढिराखेको छ । उदयपुर जिल्लामा तत्कालको अवस्थामा पार्टी संचालन सम्बन्धि आम निति बनाऊँ । कसैगरी हामीहरु निर्णयको प्रक्रियामा जान्छौँ । त्यो प्रक्रियामा सवैलाई सहभागि गराउँने ।व्यक्तिगतरुपमा नभई नीतिगत रुपमा पार्टी संचालन गर्ने मापदण्डहरु बनाउने, आचारसंहिताहरु निर्माण गर्ने त्यसबाट पाटीलाई अगाडी बढाउने । काम गर्ने साथीहरुलाई पार्टीमा अगाडि बढाउने । काम गर्नु भनेको हाईफाई फाईफुर्ती देखाउने कुरा होईन । जनताको घर आगनमा पार्टी पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? जनताको मनमा पार्टीलाई पु¥याउन सकिन्छ कि सकिदैन ? त्यसैगरी काम गर्ने कार्यकताहरुको लागि प्रोत्साहनको व्यावस्था गर्ने, त्यसरी काम नगर्ने बाहिर फेरो टाक्कटुक्क गर्नेहरुलाई फेरी त्यसरी नै मुल्याङ्कन गर्ने । अव यो पार्टीभित्र मुल्याङ्कनको प्रणालीलाई पनि व्यावस्थित बनाउने, बैज्ञानिक बनाउने, न्यायोचित बनाउने र अर्को पाटी संचालन पद्धति पनि पारदर्शी बनाउने छौं । नेतृत्व पार्दशी नहुने, नेतृत्व कुनामा बसेर कुनै ग्राउण्ड डिजाईन गरेर फुत्त निस्केर भाग्ने गरी हैन । अब, खुल्ला बहसमा आउने, खुल्ला छलफलमा आउने पाटी जस्तो हामी जिल्ला कमिटि छलफल गर्छौँ भने जिल्ला कमिटिका सवै साथीहरुसँग नेतृत्वले छलफल गर्ने । कोठामा बस्ने चिनेको २÷४ जना साथी बोलाउने के गर्ने यसो गर्ने बहुमत पु¥याउँ अनि पास गरौँ, यस्तो होईन । खुल्ला छलफल चलाउने त्यहाँबाट एउटा निश्कर्ष निकालेर अनि अगाडी बढुन सकियो भने सापेक्षिकरुपमा पूर्णतः म भन्दिन तर तत्कालिन हिबासले सापेक्षिक रुपमा यो गुटबन्दि, बेथिति विस्तारै नियन्त्रण हुदै जान्छ । फेरी यसमा उदयपुरको नेकपाले मात्रै चाहेर यो समस्याको समाधान हुने हैन । यो रोग त आम बनेको छ । देशै भरको नेकपामा समस्या छ । अरु पार्टीमा पनि समस्या छ । देशव्यापीरुपमा सवै पार्टीहरुमा अझ नेकपाको केन्द्रदेखि नै यो अभियान सुरु हुन जरुरी छ । यहाँ उदयपुरले मात्रै चाहेर पनि सम्भव छैन । यसलाई हामीले प्रयत्न गर्ने यसमा सवैले साथ दिन्छ । र अन्यत्र पनि सुरु भएको छ । केन्द्रका नेताहरुलाई पनि हामी आग्रह गर्छाैँ ।
पूर्णपुष्टि : यो देशब्यापी हो अन्य जिल्लामा पनि छ भनेर पन्छिने त कुरा आउँदैन होला नी ?
अध्यक्ष कटुवाल : आउँदैन । त्यो हुदैन ।
पूर्णपुष्टि : अव अलिकति विकासे कुरा गरौँ । नेकपाको राजनीतिले, गतिविधिले उदयपुर जिल्लाको विकास र समृद्धिलाई कस्तो भुमिका खेलिरहेको छ र अवका दिनमा कसरी खेल्नेछ ?
अध्यक्ष कटुवाल : विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा सरकारसँग जोडिन्छ । सरकारले नेतृत्व गर्ने कुरा हो । पार्टीले पछाडि बसेर मुलरुपमा सरकारले यो विषयलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । यसरी हेर्दा खेरी हामीसँग ३ वटा सरकार छन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार ३ वटा सरकारले याहाँको विकासलाई अगाडी बढाउने कुरा गर्दा नेकपा बर्चस्व छ । त्यो हिसावले नेकपाले याहाँ विकास गर्नुपर्ने कुराहरु के–के हो ? हामीले एउटा फोरम विकास गर्नु जरुरी छ । हामीले कुन–कुन विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो ? स्थानीय तहले आ–आफ्नो तरिकाबाट प्रयासहरु गरीराख्नु भाको छ । त्याहाँ कति प्रयाप्त छ पुगेको छ छैन । त्यो पछि छलफल हुदै जाला तर समग्रमा हामी नेतृत्व गर्दै अगाडी बढ्दैछौँ । याहाँको भौतिक पूर्वधार, सामाजिक विकासका पूर्वधार, आर्थिक विकासका पूर्वधारहरु, अरु विभिन्न क्षेत्रका पूर्वधारहरुको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । खासगरी कोशी कोरिडोर जुन चै घुर्मी चतराको सडक छ । त्यो चै निकै लामो समय अड्केर बस्यो । त्यसले हाम्रो जिल्लाभरिका महाभारत उत्तरका बस्तिहरुलाई एउटा राष्ट्रिय राजमार्गको पहुचमा ल्याउँथ्यो । त्यो काम चै सरकार र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद र हाम्रो सरकारको नीतिमा केहि समस्याले गर्दा अड्कियो । फेरी सरकारले सुरु गरेको छ । त्यो कामलाई छिटो भन्दा छिटो सक्नु जरुरी छ । त्यसपछि हामीले मिर्चैया–कटारी हुदै जाने बाटो जुन उदयपुरको धेरै पुरानो बाटो पनि हो । यसलाई व्यावस्थित बनाउन जरुरी छ र महाभारतको दाँया बाँया एउटा हामीले चै वारपार भनेको जिल्ला भरि जोड्ने सडक निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यो हाम्रो मुख्य र सँगै मुर्कुचीबाट लिम्चुङ्बुङ हुदै तल सुनकोशी जाने बाटो त्यसले हाम्रो पहाडी क्षेत्रहरुलाई सहज बनाउँछ । राष्ट्रिय रुपमा सरकारले मदनभण्डारी राजमार्ग सक्दै छ । त्यसले भित्रि मधेशका ठाउँहरुलाई चुरेको कासलाई त्यसले राम्रैसँगले समेटेको छ । अव गाउँबस्तिहरुको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको विकासमा हामीले अहिले पनि गतिविधिहरु अगाडी बढाईरहेक छौं र अझै प्रभाकारी बनाउन हामी छलफल गर्दै अगाडी जान्छौँ ।
पूर्णपुष्टि : अन्तमा, अवको भावि योजना र सोचहरु के छन् ?
अध्यक्ष कटुवाल : अव हाम्रो काम भनेको पाटी एकिकरणलाई निष्कर्षमा पु¥याउने । त्यो भनेको पाटीलाई तलदेखि माथिसम्म आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ । त्याहाँ पाटीलाई भावनामा, विचारमा, व्यावहारमा सवैमा एकताबद्ध गराउने मुल काम यहि हो । यसमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा सत्ताधारी पार्टी त्यसमा पनि दुई तिहाई सत्ता सर्मथन भएको सरकारको पार्टीको जिल्ला तहको नेतृत्व भएको हिबासले जनताको समस्याहरु, जिल्लाको विकास निर्माण र एउटा समृद्ध जिल्ला बनाउने, विकसित जिल्ला बनाउनका निम्ति पार्टीको तर्फबाट म अध्यक्ष भएको हैसियले जुन–जुन भुमिका खेल्नु पर्ने हो । त्यसलाई हामी सवै बसेर के–के गर्नु पर्ने हो तय गर्छौँ । तय गरेर हामी काम कार्वाहीलाई अगाडी बढाउँछौँ । यो नेकपालाई जनताको मन–मनमा स्थापित गर्ने जनताको पाटी बनाउने काममा हामी अगाडी बढ्छौँ ।
कर, डर होइन रहर हो, गौरब लायक कुरा हो : करदाता सेवा प्रमुख बुढाथोकी
नागरिक जिउधनको निम्ति सुरक्षा योजना जति कडा छ, जुवातास र मापासेमा त्यति नै कडाई छ : प्रजिअ, एसपी
रौतामाई गाउँपालिकामा पर्यटन विकासको प्रचुर संभावना
गरिबको मुहारमा खुसी बाँड्न चाहन्छु : अध्यक्ष राई
हो, म ठूलै सपना देख्छु : मेयर चौधरी
पुरातन सोच र ग्रामिण महिला
बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदबारे सोचौँ
सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो
लागू औषध दूब्र्यसन रोक्न, मनैदेखिको प्रतिबद्धताको खाँचो
आज मिति २०७६ साल भदौ २६ गते बिहीबार ।…